Home Opinion Axkaamta Ramadaanta, Sheekh Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan-Rakuub, Q.2aad
Qofku waa in uu Muslim yahay.
Qofku waa in uu qaangaadh yahay (qof aan qaan-gaadh ahayn laguma laha soon balse haddii uu karayo loo diidi maayo).
Qofku waa in uu miyir qabaa oo maskax ahaan uu dhan yahay.
Qofku waa inuu awood u leeyahay soonka (waxa meesha ka baxaya qofka da’da ah, ka xanuunsanaya, haweenayda uurka iyo ta jaqsiinaysa).
Hadma ayaad soomaysaa, maxaa se lagaa rabaa?
In la arko dhalashada bisha Ramadaan. Rasuulku CSW waxa uu yidhi “aragti ku sooma, aragtina ku afura.” Waxa kale oo uu yidhi “haddii bishu idinka qarsoonto Shacbaan dhammaystirta.”
Niyadda: Waa in niyad uu qofku la yimaaddaa oo uu go’aansadaa in uu soomayo. Rasuulku CSW wuxu leeyahay “camal dhammaantii waa niyadda.”
In laga tago hadallada bilaa macnaha ah. Rasuulku CSW wuxuu lahaa “qofka aan joojin hadalka bilaa macnaha ah Alle dan iyo muraad kama laha inuu sooman yahay iyo in kale.” Waxaa halkaa laga fahmayaa in soonku u baahan yahay in laga ilaaliyo hadalka bilaa micnaha ah iyo kiisa xunba. Mar kale waa kii Rasuulku CSW lahaa “Haddii lagu gardaraysto waan soomanahay dheh oo iska dhaaf.” Micnuhu waxa weeye soomkaaga ilaasho oo wixii cay iyo dagaal ah ka dheerow.
In la dedejiyo afurka: Rasuulku CSW wuxu yidhi “Wali dadku khayr ayey ku sugan yihin inta ay dedejinayaan afurka.” Qorraxda marka la hubsado in ay dhacday waa in la afuraa oo aan dib loo dhigin lana dhayalsan.
In dib loo dhigo suxuurta: Xadiiska aynu kor ku xusnay waxa ka mid ahaa in khayrku ku jiro in suxuurta dib loo dhigo, waana sunne fiican. Se khayr kuma jiro qofku in uu cashada iyo suxuurta is raaciyo. Muhiimadda laga leeyahay dib-u-dhigista suxuurtu waa in aan laga seexan salaadda subax.
In aad diinta ka baxdo. Waxa kale oo ka mid ah haddii qofku uu diinta caayo ama Alle iyo Rasuulkiisa caayo soonkiisii iyo islaamnimadiisiiba way burayaan, waxaana looga baahan yahay inuu dib u islaamo.
In aad cunis iyo cabbis u kas ah la timaaddo.
In gabadha caadadu ka timaaddo.
In aad niyadda ka jabiso (tusaale ahaan tidhaah maan iska jabiyaa).
Inaad si ula kac ah iskaga hunqaaciso.
Inaad galmo la timaaddo maalin Ramadaan si u kas ah.
Lasoco qaybaha dambe. Wixii su’aalo aad qabto waxad kala xidhiidhi kartaa Sheekh Cabdirisaaq cabdirisaaqafrican@hotmail.com
Sheekh Cabdirisaaq Cabdiraxmaan
Somaliland: Wada-hadallada Somaliland Iyo Khaatumo Oo Suurto-geliyey In Ciidammada Qaranku Sugaan Amniga Cali Khaliif Oo Gaadhay Gobolka Sool.